Anofara 500th Post Kwauri! | Martech Zone
Chipiri, Kurume 27, 2007 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Ok, zvakanyanyisa kupfuura zvishoma mazana mazana mashanu asi ndakakanganwa ndikazvikanganwa. Ndanga ndichiita blogging kweinenge 500 mwedzi ikozvino uye ndaita chaizvo mushe.
Yangu Technorati, Simba 150 uye Alexa mitsara iri pamusoro kumusoro kwandakambofungidzira kuti vangave. Ndiri kunyatso kuita mari yakatsiga pablog zvakare - kure John Chow chimiro, asi zvakaringana kundichengeta mune yangu isina-mafuta-hapana-whip-grande-mocha-starbucks tsika.
Ndakazviita sei? Kushanda nesimba. (Dzvanya iyi link: Nguva dzese pandinotarisa Loren, ini ndoda kuenda kumutambo weYankees, ndidye dzimwe imbwa, uye ndikande doro kune vamwe maRed Sox mafeni!)
Sezvo Loren akabvunza, ini ndinogaro kwira kuma3AM (dzimwe nguva husiku hwese) blogging. Ndiri kugara kuIndipolis saka handina mukana wekubuda nehama dzangu dzeSilicon Valley - asi ndave kushamiswa nemabatiro andakaita kugara ndichikurukura uye pamusoro pezviitiko nekuparadzanisa nguva yangu pakati pekutsvaga, kuyedza, kugovana, kubatana, kuve chinokonzeresa, uye kuramba uine shungu.
Muenzaniso: Husiku husiku uye nhasi zvave kuona Geo Microformats uye kuishandisa pane Kero Kugadzirisa yeshamwari nyowani Andy anobva kuUnited Kingdom.
Ndinofanira kunge ndiri kupemberera asi ndiri kuzopotsa iyi pati manheru ano. Pamwe ndichaedza kukodzera chimwe chinhu mublog blog chiuru ... handisi chokwadi. Ini ndoziva kuti shanduko hombe dzave pedyo nehupenyu hwangu nekuda kweangu achangobva kuwanikwa kugona kubatanidza vanhu uye matekinoroji kuburikidza neangu blog. Ndakagara ndichigona pakuwana nekugovana ruzivo. Iyo blog ichangobva kupa iyo yakakwana svikiro kuti ibudirire kusvika kune vanhu vazhinji. Ini ndasvika pamusoro pezviuru gumi nezviuru zvenyu… vanhu mazana mashanu nemazana mashanu pazuva rangu rakanaka. Izvo zvinofadza kwandiri. Ini ndaisakwanisa kufungidzira kutaura nevanhu zviuru zvishanu nemazana mashanu nezuva rimwe chete asi ndakazviita.
Chokwadi ndechekuti, blogging inogutsa kupfuura chero basa iyo yandakambove nayo. Vaverengi vandinogovana ruzivo navo vane nyasha, vanoremekedza, vanoremekedza, vanoonga uye vakatendeseka. Ini ndabatsira mazana evabloggi pachezvangu kuvandudza mablog avo - uye ini ndingadai ndisina kumboita izvozvo pasina rubatsiro rweavo mabloggi pamberi pangu vakagovana zvakadaro vasingazvibati. Ndinovatenda nekushingairira kwavo kusinganeti uye kutsvaga kusingaregi kwemhinduro dzatiri kutsvaga tese. Zvakare, ndinotenda denderedzwa rangu repedyo rehama dzinoramba dzichindikurudzira uye vachindiudza kuti ivo vanoziva kune zvakawanda zvinouya nenzira yangu.
Saka… Vanofara mazana mashanu kune mose. Kutenda nekuverenga. Kutenda nekugovana. Kutenda nekundikurudzira kuti ndishande nesimba kupfuura zvandaimboita. Kugovera mabhuku hakuna kumbove basa, kwave kuda kwangu. Ini handikwanise kuwana zvakakwana zvemabhuku, zvinyorwa, mablog, makomenti, kana tekinoroji. Ini zvino ndirikushingairira kubvunza makambani pane yavo blogging zano - chimwe chinhu chandanga ndisina kumbofungidzira kuti ndinenge ndichiita 500 mwedzi yapfuura.
Sekutaura kwaLoren (zvakadaro zvakananga), ini am iyo A-Chinyorwa blogger. Ini handifanire kunge ndiri pane chero runyorwa runyorwa. Nekuti iwe unodzoka uye unogoverana mukukurukurirana neni zuva nezuva, wakandiita nhamba 1. Ini ndiripo! Ini handina basa nekuti chero runyorwa kana chinzvimbo chinoratidza. Ndine chikwereti nemi mose zvakawandisa nekuda kwekutarisa kwamakandipa.
Ini ndinotarisira kuona uko kunotevera mazana mashanu ezvinyorwa zvinotitora
Tags: 500 blog zvinyorwaBlog namagwatidziro
Dzimwe nguva maMac haasi iwo Akangwara
Mar 27, 2007 pa 9: 00 PM
Ndafara kuti handisini ndakatanga kutaura. Dai ndaive wekutanga ndainetsekana kuti ungafunga kuti ndanga ndichingotaura kuti ndiwane traffic pablog rangu. Ndiwe wakandidzidzisa izvozvo, bhururu wangu. Ramba uchienda. Rupo rwako rwakatoita kuti upfume neshamwari…Ndinovimba kuti account yako yekubhangi ichawedzerawo!
Mar 27, 2007 pa 9: 08 PM
Hushamwari hwakakosha kupfuura chero akaundi yekubhangi, Pat. Ndakagadzirisa posvo (usati wataura) uye ndakakanda chinongedzo kublogi rako pamusoro pe "shamwari" saka waizowana chinongedzo ichocho. Munoramba muchindikurudzira uye muchiita kuti ndinzwe nzara yekuwedzera. Iwe une yekutanga dibs pane chero "shamwari" link pano.
Kune imi musingazivi Pat, tinowanzo taura parunhare pamadhiraivha edu kuti tishande uye titaure nezvekuti tiri kuchinja sei nyika (kana kuedza). Pat ane bhurogu rinonakidza - hunyanzvi hwake hwekunyora huri nani kupfuura hwangu uye kugona kwake kubatanidza rugwaro kuhupenyu chinhu chandinoshuvira.
Pat akatanga makambani akati wandei akabudirira uye anoziva zviri nani kupfuura chero ani kuti shamwari, mutengi, uye kushambadzira zvinorevei. Heck, akatotora maColts kuSuperbowl! Mukomana uya Peyton akabatsira zvishoma.
Mar 27, 2007 pa 8: 55 PM
A nemoyo makorokoto kwamuri!! Zvinoshamisa chete zvinoshamisa.
Thanks Loren! Iwe uri mumwe wevazhinji vanokurudzira!
Mar 27, 2007 pa 10: 28 PM
Makorokoto, Doug. Ndakanakidzwa nekuverenga bhurogi rako uye ndinotarisira kune mazana mashanu mamwe. Pane runyerekupe rwuri kuitika rwekuti mablogger anogona kutora penjeni mushure meiyo 500th post - saka ndinofungidzira kuti uri pakati pe-blog-hupenyu dambudziko izvozvi. 🙂
Mar 27, 2007 pa 9: 34 PM
Makorokoto Doug! Wauya kure munguva pfupi.
Sezvawakataura, rimwe zuva uye kutumira panguva ...
Dai pasina kubhurogi, tingadai tisina kuita shamwari… saka sewe, ndinotenda nekubloga uye kubatana kwandakaita mumakore apfuura…
Zvinonakidza mashandiro anoita zvese izvi…
Chekupedzisira, mukufamba kunonakidza, ndiri munzira kutanga pamusoro kusvika pamwero wakati neURL yangu itsva… zvichange zvakatsvinda kuona pazvinenge zviri mumakore… Ndinovimba unenge uripo pakukwira.
Mar 27, 2007 pa 9: 41 PM
Ndatenda, Sean. Iwe wakandikanda mamwe makuru SEO uye CSS matipi panguva ino uye ndinotenda chaizvo rubatsiro rwese! Iwewo uri IE6 yangu (yuck!) murindi.
Kutarisira mamwe matipi… sekuziva kuti sei Perank yangu inogara ichiita kunge zero! Ndipe rubatsiro paGoogle-Mukomana!
Mar 27, 2007 pa 10: 09 PM
Makorokoto Doug kubva kune imwe 3AM blogger. Ita iyo inotevera Starbucks Yakawedzera Yakakura chero 🙂
Mar 28, 2007 pa 11: 55 AM
Shamwari Indy blogger inoti Mhoro 🙂
Mar 28, 2007 pa 9: 24 PM
Makorokoto! Zvinokurudzira kuona basa rose rakaoma rawaisa mariri mukati megore rapfuura uye nekukurumidza kukura kwaro. Ndiri kutsvaga kutumira #1000 futi.
Mar 28, 2007 pa 9: 26 PM
Mar 31, 2007 pa 1: 03 PM
Basa rakanaka, VaKarr!
Mar 31, 2007 pa 2: 07 PM